के ओबामा नेक्स्ट भिस्टा हो? | Martech Zone
सोमबार, नोभेम्बर 3, 2008 बिहीबार, जुलाई 2, 2015 Douglas Karr
यो २०० 2008 को चुनावको अघिल्लो रात हो र म अझै भोलीको छनौटमा उत्साहित छैन। म मद्दत गर्न सक्दिन तर हैरान भए कि यदि बराक ओबामा भिस्टाको एक रिडु मात्र हुन् कि:
विशाल मार्केटिंग बजेट।
परिवर्तनको लागि Hyped।
अधिक स्थिरता को प्रतिज्ञा।
अलि बढी महँगो।
मिडिया र पंडितहरूले यसलाई पहिले नै ओबामाको जीत भनेका छन्। केही महिनामा, मलाई लाग्छ कि अमेरिका एक को लागी इच्छा राख्दछ भने डाउनग्रेड, वा पनी एक अवसरमा स्विच गर्न को लागी म्याक। (म्याककेन, त्यो हो)।
टैग: 2008 चुनावबाराक ओबामाचुनावओबामा
दिन को सबै भन्दा राम्रो ट्वीट!
TX4ले पोस्ट गर्नुभयो।
राजनीतिमा हास्यविराम चाहिन्छ
माफ गर्नुहोस् साथीहरू, मैले मेरो टिप्पणी नीति उल्लङ्घन गरेपछि मैले यस पोस्टमा टिप्पणीहरू सफा गर्नुपर्‍यो।
OpenMinded सँग केहि राम्रा बिन्दुहरू छन्। तपाईं सहमत हुनुहुन्न भनेर उसलाई नट भन्नु वास्तवमा अज्ञानताको लक्षण हो। मैले उसको प्रतिक्रिया मेटाएको देखे तर यो जायज थियो। यहाँ दुई वर्षको लागि पाठक भएको डगलस, मैले तपाइँको बारेमा र तपाइँ कसरी तपाइँको टिप्पणीहरू सेन्सर गर्ने छनौट गर्ने बारे थोरै सिकेको छु। तपाईका लागि अरू मानिसहरूका टिप्पणीहरू छोड्नु ठीक छ जुन तपाइँसँग मात्र सहमत हुनुहुन्छ तर नमान्नेहरूलाई हटाउनुहोस् र परिणामको रूपमा तिनीहरूलाई हप्काउनुहोस्?
तपाईं धेरै राम्रो होस्ट डगलस हुनुहुन्न र म भविष्यमा तपाईंको ब्लगको कम पढ्ने छु। माफ गर्नुहोस्।
वास्तवमा, म OpenMindedNut को बिन्दुहरु संग असहमत छैन। वास्तवमा, यो एक 'अपरिपक्व' पोस्ट हो भनेर उहाँको व्यक्तिगत आक्रमण बाहेक सबैसँग म सहमत छु। साथै, मैले उसलाई नट भनिन। उनले आफूलाई नट भनिन् । ममाथिको उनको दोस्रो व्यक्तिगत आक्रमणको परिणामस्वरूप मैले टिप्पणीहरूको श्रृंखलालाई हटाइयो। कृपया टिप्पणी नीति पढ्नुहोस्, यो धेरै, धेरै महिनाको लागि परिवर्तन भएको छैन।
म तपाईंलाई पाठकको रूपमा गुमाउन घृणा गर्छु, तर बुझ्नुहोस् कि मैले आक्रमणमा जान मानिसहरूको लागि आफैलाई खोलेको छु। म केही जिम्मेवारी लिन्छु।
म त्यो डगलस किन्दिन। तपाईंले प्रयोगकर्ता नामको आधारमा केही प्रकारको उपहास गर्न रोज्नुभयो। "नट" को अर्थ धेरै कुरा हुन सक्छ। तपाईले सोचेको जस्तो नहुन सक्छ। यसलाई सामना गर्नुहोस्, तपाईंले यहाँ खराब निर्णयमा भयानक नराम्रो गल्ती गर्नुभयो। उसको पोष्टको सामग्रीमा तपाईको ब्लग पोष्ट भन्दा बढी तत्व थियो।
मेरो बुबाले प्लान्टमा 32 वर्षको हिजो आफ्नो जागिर गुमाउनुभयो। यो देशमा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ । परिस्थितिलाई गिल्ला र गुनासो गर्नुको सट्टा किन समाधान दिनुहुन्न? तपाईं हामी अरू जस्तै मार्केटिङ केटा हुनुहुन्छ। गुनासो गर्नु यो देशको रोग हो । यसबाहेक, तपाईंले ओबामा यस देशको लागि राम्रो छैन भन्ने महसुस गर्नुभयो - तपाईंले यो पोस्ट सुरु गर्नुभयो। तपाइँका धेरै पाठकहरूले तपाइँको टिप्पणी र पछि कसैको राय हटाउने साथ यो पढेका छन्।
हुनसक्छ व्यक्तिले तपाईंको पोष्ट वर्तमान परिस्थितिको कारणले अपरिपक्व भएको महसुस गर्यो र "के आउँदैछ" भनेर गिल्ला गर्ने वा गुनासो गर्नु अपरिपक्वताको संकेत हो। यसलाई विभिन्न तरिकाले पढ्न सकिन्छ।
अहिले चुनावलाई लिएर ठट्टा गर्ने समय होइन । त्यहाँ मानिसहरूले आफ्नो जागिर र घरहरू गुमाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईं आफ्नो जीवनमा सेट र स्थिर हुन सक्नुहुन्छ तर यस देशको 60% अन्यको बारेमा सोच्नुहोस्, यदि पछिल्लो2महिनाको आर्थिक नतिजाको कारणले पीडामा परेको विश्व हो।
मलाई साँच्चै लाग्छ कि तपाईंले आफ्नो अहंकारलाई यसको बाटोमा जान दिनुभयो र रेखाहरू बीचमा पढ्न असफल हुनुभयो।
तपाईंले OpenMindedNut लाई शंकाको फाइदा दिनुहुन्छ। म चाहन्छु कि तपाईले मलाई पनि समान लाभ प्रदान गरिदिनुहुन्छ। यदि तपाईं मसँग राजनीति अफलाइनमा छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने, म पक्का छु कि तपाईंले मेरो दृष्टिकोणलाई यो पोष्टमा यहाँ चित्रित गरिएको भन्दा धेरै फरक पाउनुहुनेछ।
यो देशमा धेरै, धेरै दुखद दिन हो कि कसैले एक पक्ष वा अर्कोलाई प्रश्न गर्न सक्दैन, मानिसहरूलाई असभ्य, क्रोधित र टकराव बिना। साँच्चै, धेरै दुखद।
वाह मैले भर्खरै OpenMinded मा तपाईंको प्रतिक्रिया पढें। तपाईंले उसलाई दिनुभएको त्यो एकदम कम प्रतिक्रिया थियो र उसको टिप्पणी हटाउनु अझ खराब थियो। म अब तपाईको ब्लग पढ्ने छैन।
तृषा (गम्भीरतापूर्वक) सुनेर दुख लाग्यो। म यो टिप्पणी थ्रेडलाई बायाँ बासिङ वा दायाँ बासिङ पक्षपाती बकवासमा परिणत हुन चाहन्न जुन इन्टरनेटको बाँकी भागमा परिणत भयो।
OpenMindedNut को उपनाम 'OpenMinded' र 'Nut' हो। मैले उपनाम बनाएको होइन, उनले गरे। मैले उसलाई यति मात्रै सम्झाएँ । साथै, उनको पोस्टमा व्यक्तिगत आक्रमणलाई 'अपरिपक्व' भन्दै टिप्पणी नीतिको उल्लंघन भयो। उसको अर्को आक्रमण झनै घिनलाग्दो थियो।
तपाईं सहि हुन सक्नुहुन्छ... उत्तमको लागि आशा गरौं!
हाम्रो कुराकानीले मलाई सधैं पुष्टि गरेको छ कि तपाईं गणतन्त्र वा लोकतान्त्रिक होइन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। दुर्भाग्यवश तपाईंले प्रजातन्त्रवादीहरूको बारेमा हास्यास्पद समानता बनाउन रोज्नुभयो। तपाईंले अहिले सम्म थाहा पाउनुपर्छ कि तिनीहरू "संवेदनशील" पार्टी हुन् र तिनीहरूले आफ्नो प्रतिक्रियामा यो देखाउँछन्। मान्छेहरू- चंचल हास्यको लागि थोरै प्रशंसा गर्नुहोस्!
र साथै, म तर्क गर्छु कि Vista बाट XP मा स्विचलाई अपग्रेड मानिनेछ... केवल मेरो2सेन्ट। 🙂
मैले त्यो टिप्पणी OpenMindedNut द्वारा देखे। मलाई लाग्छ यो एक राम्रो पोस्ट थियो। डगलस, यो राजनीतिको बारेमा मजाक गर्ने समय होइन। यहाँ अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानिसहरू आर्थिक रूपमा चोटग्रस्त छन्, आफ्नो जागिर, आफ्नो घर गुमाइरहेका छन्।
साँच्चै, मैले उनको मूल्याङ्कनमा केहि गलत फेला पारेन। उहाँसँग केहि धेरै मान्य अंकहरू थिए। किन हटाउनुभयो ? उसको आक्रमण सम्भवतः उसलाई नट बोलाएर, उहाँमाथिको आक्रमणको कारण थियो। त्यो तपाईबाट कमजोर प्रतिक्रिया थियो।
उसले आफ्नो कमेन्टमा केही सोचाइ राखेको देखेर त्यो वान लाइनर होइन, किन उसलाई बाहिर निकाल्नुभयो ? माफ गर्नुहोस् डगलस तर म यहाँ तपाईंसँग असहमत छु। पीडितको भूमिका निर्वाह गर्नु र यसलाई "नीच" भन्नु तपाईंले आफ्नो विचार लुकाउन खोजेको संकेत हो।
त्यस्तै रूपमा, यदि तपाइँको ब्लगका पाठकहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूले उनीहरूलाई नाम नलिइकन आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन्, तब हामी मध्ये धेरैले यहाँ योगदान गर्ने कुनै कारण छैन।
तपाईले धेरै मान्य बिन्दुहरू बनाउनुहुन्छ। कुनै पनि हिसाबले मैले OpenMindedNut (उनको नाममा नट डब्ल्यूएएस) सेन्सर गर्न खोजेको होइन। म यहाँ सम्मानजनक ब्यानरको कदर गर्छु र आशा गर्दछु कि तपाईं वरिपरि रहनुहुन्छ।
मैले कमेन्ट आदानप्रदान गरेको देखेँ... यो पोष्ट हटाउनुमा के नराम्रो थियो? के तपाई धेरै संवेदनशील हुनुहुन्न?
यसको प्रख्यात ब्लग शिष्टाचार हो कि जब तपाइँ त्यहाँ केहि बाहिर राख्नुहुन्छ, तपाइँसँग सहमत नहुन सक्ने प्रतिक्रियाहरूको अपेक्षा गर्न। तर यसलाई हटाउन, धेरै गरीब छ र तपाईं लुकाउन केहि छ भन्छन्। यदि तपाइँ आलोचना लिन सक्नुहुन्न (र स्पष्ट रूपमा तपाइँ यसलाई सुरु गर्नुभयो), त्यसपछि तपाइँ लेख्नु हुँदैन। तपाईंको पाठकहरूलाई सेन्सर गर्ने र तपाईंको संवेदनशीलताले तपाईंको बारेमा धेरै कुरा भन्छ।
OpenMindedNut ले लेखेको सबै कुरा धेरै धेरै तथ्य हो। बुशको स्वीकृति मूल्याङ्कन इतिहासमा सबैभन्दा कम हो। सायद तपाईंले त्यो गुगल गर्नुपर्छ। धेरै जसो देशले केटालाई मन पराउँदैन र उसलाई बाहिर निस्कने प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। हामी परिवर्तन हेर्न चाहन्छौं। बेरोजगारी पनि दशककै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । ध्यान दिनुभएन ? वा के तपाईं चीजहरू परिवर्तन हुने आशामा चट्टानमुनि आफ्नो टाउको राखेर लुपबाट बाहिर हुनुहुन्छ?
म रिपब्लिकन हुँ। र बुशलाई दोस्रो कार्यकालका लागि मतदान गरेर मैले ठूलो गल्ती गरें। ओबामालाई मौका नदिने र उसलाई आफ्नो पोस्टमा लेखेर UNAMERICAN हो। हुनसक्छ यही कारणले OpenMindedNut शब्द "अपरिपक्व" प्रयोग भयो? मलाई विश्वास छ कि तपाईंले पनि 'नट' शब्दबाट गलत अर्थ लिनुभयो। आजकल कसैलाई नट भन्नु यो हिप हो किनभने तिनीहरू आफ्नो क्षेत्रमा "जानकारमा" / विशेषज्ञ छन्।
अनुहार बचत गर्न, तपाईंले त्यो टिप्पणी फेरि राख्नुपर्छ र मानिसहरूलाई पढ्न दिनुपर्छ। यो सत्य हो र कहिलेकाहीँ सत्यले पीडा दिन्छ। हामी सबै अमेरिकी हौं, सायद हामीले यस्तै व्यवहार गर्न थाल्नुपर्छ?
हो! राजनीतिमा ठट्टा गर्ने बेला होइन र ? के तपाइँ हरेक पटक SNL ले उनीहरूको स्किटहरू प्रसारण गर्दा टिभी बन्द गर्दै हुनुहुन्छ? डगले भोलिको चुनावको बारेमा आफ्नो अनिश्चितताको एक राय मात्र साझा गर्नुभयो। OpenMinded ले के भन्यो मलाई थाहा छैन, तर म डगलाई राम्ररी चिन्छु र विचारको असहमतिको कारणले उसले कहिल्यै कसैको टिप्पणी सेन्सर गरेको कल्पना गर्दिन। टिप्पणी नीति पोस्ट गरिएको छ र डगले यसलाई लागू गर्यो। यदि तपाईं डगसँग असहमत हुनुहुन्छ भने, पढ्न रोक्नुहोस्। कतै जानुहोस्, तर यो कसरी फरक छ कि तपाईले उसलाई आफ्नै लागि निन्दा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँ तपाइँसँग असहमत व्यक्तिलाई तपाइँको आफ्नै एक्सपोजर सेन्सर गर्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो विचार यो देशमा सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूलाई सुन्ने अधिकार छ वा मैले वा अरू कसैले उनीहरूलाई मञ्च दिनुपर्छ भन्ने होइन। म विश्वास गर्छु कि डगको पोस्ट हल्का हुनुपर्छ। मानिसहरूले अलिकति आराम र हल्का हुन आवश्यक छ।
मलाई यो अधिकार प्राप्त गर्न दिनुहोस् ... यतिसम्म म अपरिपक्व, मोटो छु र आहारमा जान आवश्यक छ, गूंगा, कमजोर दिमाग, एक बुश प्रेमी, एक ओबामा घृणा गर्ने, UNAMERICAN, मानिसहरूलाई सेन्सर गर्ने, अपमान गर्ने, जो 'प्रति सहानुभूति छैन। आफ्नो जागिर गुमाएँ, म राजनीतिबाट मजाक बनाउँदैछु... र म मेरो जीवनमा सेट र स्थिर छु।
सबै किनभने मलाई आश्चर्य छ कि ओबामा वास्तविक सम्झौता हो कि होइन, वा उहाँले मेरो नितम्ब उडाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो कि मैले कहिल्यै पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेको अन्य राजनीतिज्ञहरू जस्तै।
वाह, तपाईहरुले मलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ!
तपाईंले डगलस - सेन्सरशिप के गर्नुभयो तपाईं पाठकहरूले देख्नुभयो। पोस्ट नराम्रो थिएन। तपाईंले यसलाई नराम्रो देख्नको लागि खराब बनाउनुभयो किनभने यो सहमतिमा थिएन। तपाईं संवेदनशील देखि wayyyyyyyyy हुनुहुन्छ!
यो भर्खरको पोस्ट धेरै दयनीय छ र तपाईले मजाकमा आफैंबाट अपराधलाई हटाउन प्रयास गरिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। माफ गर्नुहोस् तर यो धेरै लंगो छ!
तपाईं बिल्कुल सही हुनुहुन्छ! हे भगवान्! टिप्पणीहरूको यो पृष्ठमा एक नजर राख्नुहोस् - मलाई धेरै राम्रो प्रकाशमा राख्नको लागि मैले निश्चित रूपमा सेन्सर गरेको छु। मैले पक्कै पनि मसँग सहमत नभएका सबै विचारहरू हटाएको छु।
पर्खनुहोस् - शैली र आकर्षण भएको कालो केटा भिस्टा हो, र क्रस्टी पुरानो पशु चिकित्सक म्याक हो? वाह, त्यो मैले सुनेको सबैभन्दा पछाडि सादृश्यता हो।
तपाईंसँग अहिले सम्मको सबैभन्दा मान्य बिन्दु हुन सक्छ। 🙂
केवल मेरो बिन्दु घर ड्राइभ गर्न:
मैले यो भन्नु अघि: म म्याकेन समर्थक वा ओबामा समर्थक होइन।
नोट: कांग्रेसको अनुमोदन मूल्याङ्कनहरू अहिले बुशको स्वीकृति मूल्याङ्कनभन्दा खराब छन्... दुई वर्ष पहिले के भयो जब मानिसहरू कांग्रेसमा सत्ता परिवर्तनको बारेमा उफ्रिरहेका थिए? र जोन केरी राष्ट्रपति भएको भए के हुन्थ्यो? के डेमोक्र्याटहरूले पनि व्हाइट हाउसमा मौका पाउनेछन्?
संसारको तलतिरको ढलानको लागि एक व्यक्ति जिम्मेवार छैन! पक्कै पनि उसले केही निर्णयहरू गर्यो जसले प्रभाव पारेको थियो, तर हाम्रो देशले के गुज्रिरहेको छ त्यसको बहुमत संघीय सरकारद्वारा शक्तिको घृणित दुरुपयोग र जनतामाथिको अतिक्रमणसँग स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित हुन सक्छ।
दुबै पक्षहरूले भनेको कुरासँग मानिसहरू असहमत भए पनि, यो भनिएको थियो कि OpenMindedNut ले टिप्पणी नीति उल्लङ्घन गर्‍यो। ब्लगरसँग आफूले चाहेको र जसलाई (हरू) सेन्सर गर्ने अधिकार छ। आखिर, वेबसाइट को मालिक को छ?
बुबा, म पनि भोलिको लागि धेरै उत्साहित छैन। म सधैं एक दिन मतदान गर्न सक्षम हुने विचारको बारेमा बच्चाको रूपमा उत्साहित थिएँ... र यो पहिलो राष्ट्रपतिको चुनाव भएकोले म मतदान गर्न सक्छु... सम्पूर्ण दृश्य खराब र निराशाजनक छ। एटेन्सन डेफिसिट डेमोक्रेसी नामक पुस्तकमा भनेझैं... भेडाहरूको गुच्छाले आफ्नो अर्को शेपर्ड इन चीफ चयन गरेको देख्नु दुःखद छ... चाहे त्यो रातो होस् वा नीलो।
तपाईको बिन्दु हराइरहेको छ। OpenMindedNut ले कुनै पनि टिप्पणी नीति उल्लङ्घन गरेको छैन। जहाँसम्म म चिन्तित छु, उहाँ यसमा राम्रो हुनुहुन्थ्यो। डगलसले यसलाई पूर्ण रूपमा गलत व्याख्या गरे र यसलाई स्क्वाश गर्न रोजे किनभने यो उनको राजनीतिक विश्वाससँग सहमत थिएन। पदमा अमान्य नभएको केही थिएन। OpenMindedNut "अपरिपक्व" भन्यो, के त्यो धेरै खराब छ? Douglass overracted र एक संवेदनशील व्यक्ति हो। तर त्यो पोस्ट डिलिट गर्नुको कारण त होइन र ?
यहाँका धेरैजसो मानिसहरूले यो देखे तापनि डगलसले आफूलाई पीडित भएको रूपमा आफ्नो रक्षा गर्न जारी राख्छ। यदि तपाईंले मलाई सोध्नुभयो भने यो साँच्चै दयनीय र दुःखी छ।
उहाँको राजनीतिक मान्यतामा म सहमत छैन भनी किन भनिरहेका छौ ? उसले भनेको धेरैजसो कुरासँग म पूर्ण रूपमा सहमत छु! ओइ। पहिले नै पर्याप्त ... अगाडि बढ्नुहोस्।
Vista देखि XP मा स्विच एक अपग्रेड हो, OUCH!! (राम्रो राखे पनि।)
हाम्रो अर्को राष्ट्रपति, बराक ओबामामा। ग्रीष्मको अन्त्यसम्म म ओबामाको बारेमा शंकास्पद थिएँ।
धेरै सफल उद्यमीहरू जस्तै, बराक ओबामा, कागजमा, घरको दौडमा हिट गर्न सक्ने व्यक्ति जस्तो देखिँदैन। उहाँसँग अनुभवको कमी भएता पनि उहाँ असल सीईओ, शान्त, शान्त, तार्किक — दृष्टिका साथ हुन सक्नुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। र, मानिसले देखाएको छ कि उसले कार्यान्वयन गर्न सक्छ।
उहाँ जस्तो होस् वा होइन, ओबामासँग ठूलो, विशाल योजना र भिजन थियो र यसलाई2वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण देशमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि यो कुनै सानो उपलब्धि होइन।
ओबामाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजनीतिक कार्यालयका लागि अभियानलाई पुन: आविष्कार गरेका छन्। एक ब्रान्डको रूपमा, उहाँले प्रतिध्वनित गर्नुभएको छ र मतदाताहरूसँग कर्षण प्राप्त गर्नुभएको छ जुन मैले मेरो जीवनकालमा देखेको छैन। व्यक्तिगत, साना योगदानकर्ताहरू, अनलाइनबाट ठूलो रकम उठाउने ओबामाको क्षमता अचम्मको छ। त्यो प्रामाणिकता हो र कुनै नौटंकी छैन।
ओबामा २ वर्षअघि अज्ञातबाट अमेरिकी राजनीतिको एकमात्र महाशक्ति बनेका थिए। यदि उहाँ एक उद्यमी हुनुहुन्थ्यो भने, VC कम्पनीहरूले उसको तालिकामा पुग्न बिन्ती गर्नेछन् र हामीमध्ये धेरैले उहाँको आईपीओको आशा गरिरहेका हुनेछौं।
ओबामा बाटोमा पनि एक राम्रो मान्छे भएको छ। यसले उनको राम्रो सेवा गरेको छ।
यदि उहाँले बीचबाट शासन गर्नुभयो भने, मलाई लाग्छ कि उहाँ सफल राष्ट्रपति हुनुहुनेछ।
ओबामाको अभियानले गरेको कामलाई म पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छु र उनको अभियानको इन्टरनेट र मार्केटिङ क्षमताको प्रयोगमा केही 'विस्मय'का साथ कुरा गरेको छु। म सहमत छु - उहाँलाई मन पराउनुहोस् वा होइन - उहाँले यो देशमा राजनीति चलाउने तरिका परिवर्तन गर्नुभयो।
यसमा मेरो एउटै बिन्दु थियो कि उसले के गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन भन्ने तथ्यमा केही उदारता (सायद खराब निर्णय) फ्याँक्नु थियो। उहाँले धेरै ठूला वाचाहरू गर्नुभएको छ, तर मैले प्रत्येक5चुनावमा मतदान गरेको छु, मैले राष्ट्रपतिलाई उहाँले वाचा गरेको काम कहिल्यै देखेको छैन।
धेरै मूर्ख समानता - तपाईंको 10 मिनेटको प्रसिद्धिबाट 15 मिनेट घटाउनुहोस्।
माफ गर्नुहोस् तपाईंले यो सबै फ्ल्याक प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँसम्म म चिन्तित छु मलाई तपाइँको ब्लग पढ्न मन पर्छ, र बीन कपमा तपाइँसँग झुन्ड्याउन मनपर्छ।
मलाई याद छ एक पटक मैले CNET फोरमहरूबाट एक टिप्पणी हटाएको थियो र म यसको बारेमा धेरै पागल थिएँ किनभने मैले सोचेको थिएँ कि मैले एक ठोस टिप्पणी गरेको छु। तर दिनको अन्त्यमा यो केवल वेबसाइटमा टिप्पणी हो।
जे गरिरहनुभएको छ त्यही गरिरहनुहोस्। र यदि कसैलाई मन पर्दैन भने; तिनीहरू छोटो घाटबाट लामो पैदल यात्रा गर्न सक्छन्।
धन्यवाद स्कट! म साँच्चै यो एक मा म संग आफ्नो परिप्रेक्ष्य साझा गर्न को लागी सराहना गर्छु।
मेरो शब्दले मानिसहरूको प्रतिक्रियाको बारेमा कुरा गर्छ। डग म तपाईंको ब्लगको आनन्द लिन्छु र सोचेको छु कि तपाईंको Vista एनालोजी धेरै रमाइलो थियो। टिप्पणीहरू सेन्सर गर्ने तपाईंको अधिकार हो र यदि ट्रिशले यो मन पराउँदैन भने म सुझाव दिन्छु कि उनले के गर्ने धम्की दिएकी छिन् र पढ्न रोक्छिन्। कुनै कारणले उनी फर्किन रोक्न सक्दैनन्…
मसँग एक राय छ जुन म साझा गर्न चाहन्छु ...
म ओबामाको समर्थक हुँ तर अझै पनि मेरो फेसबुक प्रोफाइलमा तपाईंको ब्लग पोष्ट गरेको छु किनभने, यो हास्यास्पद मात्र होइन, तर ओबामा ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेमा हाइपमा बाँच्न नसक्ने खतरा छ भनेर कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। म तपाईलाई भन्न सक्छु कि म संसारको उत्कृष्ट बास्केटबल खेलाडी मध्ये एक हुँ। म तपाईंलाई बारम्बार बताउन सक्छु तर तपाईंले मलाई एनबीए कोर्टमा बाहिर निस्केर खेल्न नदेखेसम्म तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ।
ओबामा आफैंले पनि शतप्रतिशत जान्न सक्दैनन् कि उनी तयार छन् कि छैनन् किनभने उनले यो पहिले कहिल्यै गरेनन् र वास्तवमा उनीसँग यति सानो अनुभव छ यो ठूलो जोखिम हो। के यसको मतलब हामीले उहाँलाई समर्थन गर्नु हुँदैन? अहँ, त्यसो गर्दैन, शंकाको सन्तुलनमा मलाई लाग्छ कि उहाँ एक महान राष्ट्रपति बनाउनुहुनेछ तर यदि तपाईंले मलाई मेरो घरमा राम्रोसँग शर्त लगाउन भन्नुभयो भने त्यो फरक प्रश्न हो।
त्यसैले सबै पश्चिमी लोकतन्त्रमा हामी राज्य र दलीय राजनीतिको पृथकीकरण भएकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई चीजहरू बिगार्न गाह्रो हुन्छ। म मेरो हृदयले आशा गर्छु कि ओबामाले आफ्नै बयानबाजीमा जिउनेछन् तर मेरो दिमागमा एउटा कुरा निश्चित छ, उसले बुश वा म्याककेन भन्दा धेरै राम्रो काम गर्नेछ। म यो निष्कर्षमा आएको हुँ किनभने म "परिवर्तन" बारे उत्साहित छु तर ओबामाले सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पार्ने सम्भावना प्रत्येक नीतिको विश्लेषण पछि विश्वास गर्छु।
त्यो मेरो बिचार !! कृपया सबै हेटमेल मेरो व्यक्तिगत इमेलमा निर्देशित गर्नुहोस् ILoveFreedomOfSpeech@hotmail.com
धन्यवाद, शेन। म खुसी छु कि एक ओबामा समर्थकले यो लेखिएको इरादाको लागि पोस्टलाई मान्यता दिनुभयो। मैले कुनै पनि हालतमा उहाँले पूरा गरेको कामलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास गरिन।
मलाई लाग्छ कि यो सबैभन्दा समझदार र राम्रोसँग सोचिएको टिप्पणी हो जुन मैले ओबामाको बारेमा पढेको छु? बहस। सत्य यो हो, कसैलाई थाहा छैन उसले के गर्नेछ, दुबै तर्फ। यो हेर्न बाँकी छ?... कुन, मलाई विश्वास छ, डगको बिन्दु थियो। कुनै पनि समयको लागि यो ब्लग पढ्ने जो कोहीले डगसँग हास्यको सुख्खा भावना छ भनेर देख्न सक्छ। जहाँसम्म यो कुनै कुराको बारेमा मजाक गर्ने सही समय हो? यदि तपाईं जीवन र कठिन समयहरूको बारेमा हाँस्न सक्नुहुन्न भने, म तपाईंको लागि दु: खी छु। हाँसोले सबै कुरा राम्रो बनाउँछ। हाँसो साँच्चै सबैभन्दा राम्रो औषधि हो। हामी कुनै कुराको बारेमा हाँस्ने मात्र हो, यसको मतलब यो हो कि तपाईंले यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुन्छ। मलाई थाहा छ कि यो मेरो साथी डगको बारेमा सत्य हो, यद्यपि म उहाँसँग अक्सर असहमत छु, राजनीतिक रूपमा बोल्दै। 🙂
अरूसँग आलोचनात्मक हुँदा (ओबामालाई VISTA सँग तुलना गर्नु भनेको नराम्रो मजाक हो जुन म्याककेनमा पनि लागू गर्न सकिन्छ) तपाईं सचेत हुनुपर्दछ कि अरूहरू तपाईंसँग आलोचनात्मक हुन सक्छन्।
यदि तपाईं सहन सक्नुहुन्न भने, आलोचना नगर्नुहोस्!
सेन्सरशिप नराम्रो कुरा हो !!!
पोस्ट को लागी धन्यवाद। मलाई रमाइलो लाग्यो। माफ गर्नुहोस् तपाईंका केही पाठकहरू मूर्ख छन्। म अब यो साइट RSS गर्नेछु, घाटाको लागि मद्दत गर्न।
तपाईंको पोस्टको प्रतिक्रियामा:
ठूलो भिन्नता यो हो कि मतदाताहरूलाई उनीहरूको सबै अवस्थित डाटा र अनुप्रयोगहरू जोखिममा राख्न, अपग्रेडमा पैसा खर्च गर्न वा नयाँ अपरेटिङ सिस्टम सिक्न भनिएको छैन। वास्तवमा, उनीहरूलाई कर छुटको प्रतिज्ञा गरिएको छ यदि उनीहरूले केवल एक निश्चित स्विच फ्लिप गर्नेछन्। माइक्रोसफ्ट (वा कुनै पनि टेक्नोलोजी प्रदायक) सँग यो राम्रो हुनुपर्छ।
OpenMindedNut को बारे मा टिप्पणी को प्रतिक्रिया मा:
मैले उसको पोष्ट कहिल्यै देखेको छैन र मेरो ब्लगमा के पोष्ट रहन्छ र कुन पोस्ट नगर्ने भन्ने कुरा बाहेक कुनै टिप्पणी छैन। म पनि यसको मालिक छु, जसरी तपाईं आफ्नो मालिक हुनुहुन्छ। तपाईलाई उपयुक्त देखिए अनुसार चलाउनुहोस्। तपाईका अन्य पाठकहरू जस्तै म यसलाई उपयुक्त देख्छु वा पढ्छु।
अहिले जे पनि समय नभएको प्रतिक्रियामा:
म एक अमेरिकी हुँ। म अन्य मानिसहरूलाई मेरो स्वतन्त्र वाक् प्रयोग गर्ने सही समय हो भनी बताउँदिन।
राम्रो काम जारी राख्नुहोस्, डगलस।
म यो देखेर हाँसे... मैले यो के हो भनेर बुझें।
यद्यपि यदि म यसबाट रिसाएको थिएँ, यो अधिक कारणले गर्दा तपाईंले विस्टाको बारेमा के भन्नुभएको थियो !! म राजनीतिक मजाक लिन सक्छु, तर टेक्नोलोजी चुटकुले? आउनुहोस्! 😉
मैले विगत दुई वर्षदेखि तपाईको ब्लग पढेको छु र स्पष्ट रूपमा तपाईले लेख्नु भएकोमा म छक्क परेको छु। एक साथी पाठकलाई सेन्सर गर्नु किनभने उसले तपाईको पोस्टलाई अपरिपक्व भन्यो हास्यास्पद छ।
तपाईंले आफ्नो पोस्टबाट के आशा गर्नुभयो? यो केहि म्याक बनाम पीसी प्यारोडी होइन। यो सुन्दर र हास्यास्पद हुन प्रयास गर्ने प्रयास हो। यो डगलस गर्न गलत समय।
यो हाम्रो देशको इतिहासमा धेरै कठिन समय हो। विगत ३ महिनामा तीन खर्ब डलर इक्विटी बजारबाट बाहिरिएको छ । बेरोजगारी १० वर्षकै उच्च हो । मानिसहरूले आफ्नो जागिर, आफ्नो घर, आफ्नो सम्पत्ति गुमाइरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दिवालिया हुँदै गएका छन् । अनि यहाँ बसेर मजाक गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? त्यसोभए यसलाई देशभक्तिपूर्ण शंकाको साथ पछ्याउनुहोस्?
एक प्रमुख विज्ञापन फर्मको VP को रूपमा, म तपाईंलाई कहिल्यै काममा राख्ने छैन!
मैले एउटा प्रविष्टि पोस्ट गरें http://www.billkarr.com । म तपाइँ यसलाई पढ्न चाहन्छु र यदि तपाइँ यसलाई मनपर्छ भने, यो राम्रो हुनेछ यदि तपाइँ मानिसहरूलाई यसको बारेमा तपाइँको साइट पढ्न भन्नुभयो भने।
यो एक प्रकारको बमर हो ... तर जे होस्! म यसलाई प्राप्त गर्नेछु! म अझै खुसी छु!
२+ वर्षदेखि तपाईको ब्लग पढ्ने दुई व्यक्तिले तपाईको नाम कसरी गलत लेख्न सक्छन्? अनि कहाँ गयो सबैको ह्युमरको सेन्सेस ?
केही समयदेखि यो ब्लगमा गएको छैन। नर्क के भयो!? मैले यति धेरै क्रोध र निराशा कहिल्यै देखेको छैन! मानिसहरू, शान्त होस् !!
यो डगको ब्लगमा मेरो पहिलो भ्रमण हो। म वास्तवमा मेरो नयाँ फोटोग्राफी ब्लगमा मद्दत प्राप्त गर्न यहाँ आएको हुँ। मैले देखेको जस्तो कि यो अहिले सम्भव नहुन सक्छ। त्यसोभए, मैले आफैंलाई भनें, स्वयम्, किन प्रवाहको साथमा घण्टी नगर्ने। पहिलो, म कुनै पार्टीलाई मान्दैन भनेर पनि भन्न चाहन्छु। म कुनै पनि राजनीतिक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दिन। मलाई सेन ओबामा र भिस्टाको लागि डग्स सन्दर्भ मनपर्यो। आगामी ४ वर्षले त्यो सन्दर्भलाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गर्नेछ। व्यक्तिगत रूपमा, मलाई लाग्छ कि म अर्को राष्ट्रपतिसँग महान् विश्व युद्ध, l र ll पछि कुनै पनि राष्ट्रपतिको पूर्ण प्लेट छ।
मैले धेरै पोस्ट पढेको छु र मैले एउटा उल्लेख गर्नु पर्छ, आलोचना गर्न होइन, तर यसले मलाई माया गर्छु भन्ने पुरानो भनाइ ल्यायो। तान्या, एक ठूलो विज्ञापन फर्मको VP, उनले डगलाई भाडामा नलिने बताइन्। यो कथनले सबै समयको सर्वश्रेष्ठ वाक्यांशलाई अगाडि ल्यायो ——— “मैले येशूलाई भेट्टाएँ” जवाफ, मलाई थाहा थिएन उहाँ हराउनुभएको थियो!
धन्यवाद तान्या, मलाई डगले रोजगारीको लागि आवेदन गरेको थाहा थिएन।
समापनमा, मानिसहरूलाई उज्यालो पार्नुहोस्। जीवन आज एक पैसा मा परिवर्तन हुन सक्छ किनकि वर्तमान आर्थिक स्थितिले समर्थन गर्नुपर्छ। जीवन छोटो छ, मजा लिनुहोस्।
नमस्ते डग, यो माया र आशाको साथ छ कि म तपाईंलाई हाम्रो नयाँ नेतृत्वलाई अँगाल्न आमन्त्रित गर्दछु, बराकले पनि तपाईंको राष्ट्रपति बन्ने वाचा गरेका छन्। तपाईं विचारशील र उज्यालो हुनुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ कि GW बुशले कुनै पनि लोकतान्त्रिक भन्दा बढी खर्च गरे र कम गरे।
ओबामाको लागि मार्केटिङ बजेटले उहाँको समर्थन र 64 मिलियन भोटहरूको लागि प्रारम्भिक चेतावनी चिन्ह प्रतिनिधित्व गर्यो, मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपतिलाई दिइएको सबैभन्दा धेरै हो। धेरै रिपब्लिकन र कन्जरभेटिभहरूले बराकलाई भोट दिएकाले मैले धेरै खुल्ला दिमाग हुने निर्णय गरेको छु। 2012 मा, तपाईं पनि हुन सक्छ।
मसँग फलोअप छ, चुनाव पछि ओबामा निर्वाचित भएको पोस्ट त्यो मात्र भन्छ। उहाँलाई मेरो समर्थन छ र मलाई पनि गर्व छ कि यो देशले सही दिशामा यस्तो कदम चालेको छ।
फलोअप पोस्ट पढ्नुहोस्। धेरै माया र सम्मान सहित,